Gaaffiin ummata Waalaayittaafi deebiin Ministira Muummee maal ture? - BBC News Afaan Oromoo
Image copyright WOLAITA ZONE CITY ADMINISTRATION FACEBOOK PAGE
Gaaffii naannoo ta'uu godinni Waalaayittaa dhiyeesseen wal qabatee, MM Abiy Dilbata bakka bu'oota Waalaayittaa waliin waajira isaaniitti marii taasisaniiru.
Marii sanaan booda kan dubbifne hoogganaan damee Dargaggoota Adda Dimokiraasummaa Ummattoota Walayiittaa Obbo Ashannaaffii Kabadaa, namoota walgahicharratti argamuuf gara Finfinneetti imalan keessatti argama.
Obbo Ashannaaffiin akka jedhaniitti, mariin ture waa'ee gaaffii naannoo ta'uu Waalaayittaan gaafaterratti kan xiyyeeffate ture.
Bakka bu'oonni ummata Walaayittaas haaluma kan dura MM Abiy tibba gara godinichaatti imalanii turaniitti akka dhimmicharratti marii taasisuun yaada qabatanii dhiyaataniif gorseen yaada qabatanii dhiyaachusaanii Obbo Ashannaaffiin ni dubbatu.
Tibba marii MM Abiy waliin taasisanii turanittis, ajandaawwan gurguddaa sadi akka turan hima Obbo Ashannaaffiin.
''Ummanni Walaayittaa qofaasaa naannoo ta'aa? Kanneen biroo qabachuun godinaalee ollaa waliin naannoo ta'uuf? Godina namoonni baratan baayyeen keessatti argaman waan ta'eefi dachiifi ummata ballaa ummattoota 55n qabachuun akka teessuma mummeetti akka tajaajiluu kan jedhuurratti ture kan mari'annee,'' jedhaniiru.
Ajandaawwan kanneen irratti marii taasisuun ejjannoo qabatanii dhiyaachuusaanii himan Obbo Ashannaaffiin.
Haata'u amlee, gaaffii naannoo ta'uu kan murteessuu ummataa Walayittaa qofaa waan hin taaneef, qabatamaa ta'uu isaa mirkanneessuun waan rakkisuuf, godinaalee ollaa waliin ta'uun naannoo ta'uudhaaf filammaata jiru irrattis ummanni Walaayittaa marii taasiseera jedheera.
Haaluma kanaanis warri biraa yoo itti makaman hammachuu akka danda'u, kanaan alatti garuu carraafi mirga warra kaanii gidduu seenuun murteessuuf ummanni Walaayittaa aangoo kan hin qabne ta'uurratti mari'anneerra jedha.
Obbo Ashannaaffiin akka jedhaniitti, ka'umsa marii kanaatiin Walaayittaan of dandeessee motummaa naannoo biyyaalleessaa Walaayittaa, Walaayittaa Sooddoo ammoo giddugala taasiuun naannoo isaa akka hundeessuuf sagalee ummata hundaa waan ta'eefi, akkasumas mirgaa heeraan argame waan ta'eef filmaatawwan biraa akka hin hojjanneefi akka hin baafne murtee dhummaarra gahamuu hima.
Bakka bu'oonni ummata Walayittaas marii Dilbata MM waliin taasisanii yaadawwan irra gahan kanneen dhiyessaniif jiru.
Haaluma kanaanis MM Abiy gaaffichi gaaffii heera motummaa waan ta'eef isaan kan hin deebiifneef ta'uu ibsuun, haala seerri ajajjuun akka raawwatamuuf Boordii Filannoo waliin dubbachuun deebii kennuun dhimmoota hafaniif ammoo karaa bakka bu'ootaatiin deebii ballaa kan kennan ta'uu Obbo Ashannaafiin himaniiru.
"Gaaffiifi fedhiin ummata Walaayittaa naannoo ta'uu MM Abiy ibsanii, 'filamaatawwan gara biraa haalaan ilaaltanii jirtu laata?' jechuun gaaffii dhiyyeessuufii dubbata.
Filannoowwan dhiyaatan hundi gaaffii ummataa waan hin taaneef, akkasumas bakka saboota biraa dubbachuunis gaaffii heera motummaa miti.
Kanaaf, gaaffiin naannoo ta'uun ummataa Walaayittaatiin dhiyaataa jiru mirga heera motummaan kennameefiitti fayyadamuuf gaafachu malee carraafi mirga saba biraarratti murteessuu akka hin taane murteessa tahusaanii, innis ejjannoo ummatichaa kan calaqisiisu jechuun itti himanii bahu dubbatu.
Guyyaan Walaayittaan naannoon ta'a jedhee kaawwate ALI Muddee 10, 2012 ta'uu isaati.
Guyyaa kanarraa kaa'uun hangam adeemsiisa? jechuun kan gaafattame bakka bu'aan kun, ''Haala Heera motummaa keewwata 47/42 irra akka kaa'ameefi keewwata kan biraatiin, Manni Maree Federeshinii, Boordiin Filannoo waggaa tokko keessatti riifarndamii ni qopheessa jedha,'' jechuun seera caqasu.
Kanaafuu, rifarandamii qopheessuuf Mudee amma waggaa tokko guuta. Isaan booda gaaffiichi deebii kan hin argannee yoo ta'e, ummanni guyyicha eeggattee aangoo walabummaa isaatti fayyadama jedhaniiru.
Garuu ammoo dogongora Sidaamaatti umammee ture irra deebi'uuf fedhii akka hin qabne hima.
''Daandiiwwan nageenyaa ta'an hundaan Muddee 10 guuyyaa rifarandamiin itti gaggeefamu yoo kan hin baramne ta'e, ummatichi ejjannoo isaa ibsachuun murteessaa ni beeksiisa. Itti aanees qabsoo nageenyaa karaawwan adda addaatiin ni gaggeessa,'' jedheera.
Adeemsa kana keessatti rakkooleen mudatan yoo jiraate, motummoonni naanooleefi federaalaa itti gaafatamummaa fudhachuu akka qaban hubachiiseera.
Viidiyoo 'Naannoo ta'uun furtuu waan hundaa ta'uu hin danda'u' - MM Abiy Ahimad
Viidiyoo Godinni Sidaamaan Rifarandamii naannoo ta'uudhaaf sagalee kennaa jiru
Imala Kafaa MM Abiy Ahimad : 'Naannoo ta'uun furtuu waan hundaa miti'
'Murtoon uummata Sidaama daandii dimokraasii Itoophiyaan hordoftu mirkaneessa'